DHAGEYSO:Soomaali ku dhibaataysan dalka Libiya. | SMC
Home WARARKA MAANTA DHAGEYSO:Soomaali ku dhibaataysan dalka Libiya.
DHAGEYSO:Soomaali ku dhibaataysan dalka Libiya.
Soomaali badan ayaa lagu Soo waramayaa inay ku dhibaateysan yihiin gudaha Xerooyin Qaxooti oo ku yaalla dalka Libya, kadib markii sida ay sheegeen lagu amray inay isaga baxaan Xerooyinkaas, xilli ay filayeen in la geeyo wadamo kale oo amaankoodu wanaagsan yahay islamarkaana ay ka helaan nolol wanaagsan.
Qaar kamid ah dadkaasi ayaa sheegay inay dhibaatooyin ku haystaan Xerooyinka ay ku nool yihiin oo ku yaalla Magalada Tripoli ee dalka Liibiya.
Dadkaan waxay Sheegeen in loo diiday inay ka baxaan halkaas si Hay’adda Qaxootiga aduunka ee UNHCR ay u geyso wadamo kale ama ay dalkooda dib ugu laabtaan.
Cibaado Xuseen Yuusuf oo kamid ah Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Libya la hadashay Idaacada VOA-Da ayaa sheegtay in dad Soomaali ah oo ay kamid tahay loo qoray diidmo aysana ka mid noqon Karin dadka ay Hay’ada UNHCR daryeelka u fidiso ama ay geyso dalal kale.
Ugu dambeyntiina waxaay ugu baaqday Madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya gaar ahaan Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha inay gurmad u soo fidiyaan, ayna wax ka qabtaan dhibaatooyinka ku heysta dalka Libya.
Previous articleXOG RASMI AH: Farmaajo iyo Kheyre oo Isku raacay weerar cusub oo lagu qaadayo Isbaheysiga Muqdisho, Puntland & Jubbaland, Yaa fulinaya?
Next articleKooxda Macawisleeyda iyo Al-shabaab oo ku dagaalamay gobolka Bakool.